Lugood Movie metadata: Ku dar metadata in Lugood Movies (AVI, MP4, iwm)
> Resource > Video > Sida loo dar Lugood Movie metadata (AVI, MP4, MOV, MKV, iwm)
Videos iibsaday Lugood xiran yihiin macluumaad metadata, sida filim dabool, agaasimayaasha, jilayaasha, sharaxaad, iyo comment. Si kastaba ha ahaatee, sida in aad ku darto metadata in filimada aan ka iibsaday Lugood? Halkan waa xalka. Waxaan aad u caawiyay si aad u ogaato ah tagger Lugood metadata in aad si fudud ku dari ha metadata in filimada Lugood.
Wondershare Video Converter Ultimate ( Video Converter Ultimate for Mac ) waa ay hadda ku Lugood metadata tagger ugu fiican. Waxaad si fudud u dajiyaan kartaa filim Lugood galay codsiga, dhigay qaab habboon video wax soo saarka, ka dibna ku dar metadata in aad movie. Geedi socodka oo dhan waa kaliya qasabno yar gudahood. Waxaa intaa dheer, codsigan ayaa awood u ah diinta videos, sixiddiisa videos, donwloading videos, iyo DVD gubanaya. Iyada oo software ah ee gacanta ku sida, noloshaada aad u gargaartay doonaa.
Sida loo dar metadata in Lugood Movies
1 dar filimada galay codsigan
Kadib markii ay software ah, fadlan kaliya jiidi oo hoos u filimada aad galay tan Lugood metadata tagger. Ama waxaad dooran kartaa "Add files" in ay dajiyaan filimka. Haddii ay tahay DVD ah, fadlan riix "DVD Load" in aad ku darto in codsiga.
2 Calan qaab saarka sax ah
Waxaad u baahan tahay si ay u dejiyaan qaabka wax soo saarka sida Apple qalab, ama MOV, M4V. Fadlan uun doorato qalabka Apple sida qaab outpur hoos "Apple" category. Sidoo kale waxaad dooran kartaa ama M4V MOV hoos "Qaabka" category sida qaab wax soo saarka aad.
3 dar metadata in filimada Lugood
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u dar metadata in filimada Lugood. Riix icon this , magacaaga qor filim, guji "baadh", guji "OK". Markaas si guul leh aad ku dhameysan nidaamka. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel macluumaad metadata filim, kaliya waxa ay samayn gacanta. Software Tani waxay taageertaa metadata tafatirka.
4 filimada Play qalabka Apple
Tani waa tallaabadii u dambaysay. Fadlan riix "Beddelaan". Ayaa la gediyay videos macluumaad metadata la synced doonaa in Lugood si toos ah. In aad Lugood, waxaad arki doontaa in filimka la aqoonsan yahay oo leh dabool. Marka aad guji filimka, metadata sidoo kale la soo bandhigi doonaa. Markaas waxaad bilaabi kartaa si aad u daawato aad videos.
Sida aan kor ku soo sheegnay, codsigan ayaa leh awood kale oo xoog badan.
Beddelaan videos: Waxaa loogu badalo kartaa video inay qaab video kasta. Haddii aadan ka ciyaari kara videos aad telefoon ama qalab kale sababta oo ah arrin qaab waafaqsan, kaliya qaado qalab this.
Edit Video: Ma doonaysaa in aad video gaar ah la shakhsi video saamayn? Waxaad heysanaa software saxda ah. Waxay leedahay video editor ka dhisay-in si kaamil aad video.
Guba DVD: Waxaad isticmaali kartaa software si gubi aad video inay DVD disk ah qaybsiga fiican iyo ilaalinta.
Download Video: video laga goobaha la wadaago video, sida facebook, YouTube, sidoo kale waa muujinta kale waxaa ka mid ah.